Tartamayaasha Degmada Deyniile oo caawa u soo gudbay wareegga labaad ee tartanka “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Tartamayaasha Degmada Deyniile oo caawa u soo gudbay wareegga labaad ee tartanka “SAWIRRO”
Tartan cilmiyeedka bisha Ramadaan oo galay sanadkii todobaad oo ay qabaneyso Warbaahinta Qaranka, isla markaana si toos ah looga daawanayo Telefishinka Qaranka, lagana dhageysto Idaacadda Radio Muqdisho ayaa waxaa caawa kulankii afar iyo tobnaad oo ah wareegga koowaad ku tartamay tartameyaasha Degmooyinka Deyniile Vs Baydhabo oo ka kala tirsan Gobollada Banaadir iyo Baay., waxaana barnaamijka sanadkii shanaad oo xiriir ah taabagelineya Maamulka Gobolka Benaadir.
Tartameyaasha Degmada Deyniile ee gobolka Banaadir waxaa la weydiiyey todobo Su’aal, waxa ay ka jawaabeen saddex su’aal, waxaana ay iska qaldeen afar su’aal, waxa ay ka faa’iideysteen hal su’aal oo soo hareeer martay tartamayaasha Degmada Baydhabo, sidaa darteed wadarta guud ee dhibcaha tartameyaasha Degmada Deyniile ay heleen waxay noqotay lix (6) dhibcood.
Tartamayaasha Degmada Baydhabo ee gobolka Baay waxaa dhankooda la weydiiyay todobo su’aal, waxa ay ka jawaabeen saddex su’aal, iyagoo iska qaldeen afar su’aal, waxa ay ka faa’iideysteen hal suaal oo soo hareer martay Deyniile, sidaasi darteed wadarta guud ee dhibcaha ay heleen tartameyaasha Degmada Baydhabo waxay noqotay lix (6) dhibcood.
Tartamaasha labada degmo ayaa isku mari waayay su’aalihii ay ku tartamayeen, waxaana ay la yimaadeen min lix dhibcood dood dheer kaddib tartamayasha Degmada Baydhabo ayaa jebiyay xeerka tartanka u degsan, maadaama ay dood ka keenen su’aal ka faa’iideysi ahayd balse markii laga qanciyay ay ku qanci waayeen.
Guddoomiyaha Tartan Cilmiyeedka Warbaahinta Qaranka Maxamed Abuukar Axmed Ma’da oo ka hadlay tartanka ayaa sheegay in maadaama waqti dheeri ah loo baahday la isku dayay in la qanciyo tartamayaasha degmada Baydhabo, maadaama ay si qalad ah uga jawaabeen su’aashii ka faa’iideysiga ahayd, isla markaana ay ku xadgudbeen sharciga tartanka u yaalo ee dhanka anshaxa.
Tartamayaasha Degmada Deyniile ee Gobolka Banaadir ayaa caawa u soo gudbay wareegga labaad ee tartanka
Habeen dambe haddii uu Alle idmo oo ah habeenka shan iyo tobnaad ee tartanka, isla markaana noqoneysa habeenka ugu dambeeya ee wareegga koowaad, waxaa foodda is dari doono, tartamaayasha degmooyinka Kismaayo Vs Dhuusamareeb oo ka kala tirsan Gobollada Jubada Hoose iyo Galgaduud.
Madaxweyne Farmaajo oo wada hadallo la yeeshay Madaxweyne Kenyatta “SAWIRRO”
Taliyaha Ciidanka Booliska iyo Guddoomiyaha G/banaadir oo caawa kormeeray qaar kamid ah Xarumaha Ciidanka “Sawirro”